'मुख्यमन्त्रीले जस्केलोबाट कुर्सी जोगाउनुभयो, मेरा बाले पैसा तिरेर अस्पतालमा एउटा बेड पनि जोगाउन सक्नुभएन'
- विकाश पराजुली/नवराज कुँवर
खचाखच शय्या । बिरामीको अक्सिजन लेभल चेक गर्न चिकित्सक र नर्सहरूको दौडादौड । स्वाँ.. स्वाँ.. पीडा फुकिरहेका कोरोना संक्रमित । प्रत्येक बेडको आडमा अक्सिजन सिलिण्डर, कुनै रित्तिसकेका अनि कुनै रित्तिँदा ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालभित्रको याे रन्थरुमलोमा शय्याहरू खाली हुने कुनै सम्भावना देखिँदै छैन । काेराेनाका संक्रमित भने थपिएका थपियै छन् ।
तिलाेत्तमा शंकरनगरका ५१ वर्षीय रोमकान्त ज्ञवाली भुइँमै बसेर अक्सिजन लिइरहेका देखिए । इमर्जेन्सी कक्षभित्र छिर्नासाथ बायाँतिर अप्ठेरो गरी बसेका रोमकान्त कोरोना भाइरसविरुद्ध संघर्षरत छन् । उनलाई हेर्दा सास फेर्न निकै गाह्रो परिरहेको प्रतीत हुन्छ । घरीघरी मुखबाट अक्सिजनको पाइपलाई थोरै माथि उठाउँछन् अनि घोप्टो परेर खोक्छन् ।
बेड नपाएपछि भुइँमै बसेर अक्सिजन लिइरहेका रोमाकान्त ज्ञवाली ।
रोमकान्तमा गत शुक्रबार संक्रमण पुष्टि भएको थियो । अहिले प्रदेशका अस्पतालहरूको अवस्थाबारे वाकिफ उनले स्वास्थ्य जटिल नहुँदासम्म घरै बसेर सावधानी अपनाउने निधो गरे ।
तर, दैनन्दिन शरीरमा अक्सिजन लेभल घट्दै थियो । हिजो राति एक्कासि गाह्रो भएपछि छोरा अर्जुनले प्रदेशका विभिन्न अस्पतालमा पालैपालो फोन लगाए । तर, सबैतिरबाट बेड खाली छैन भन्ने जवाफ आयो । ‘केही जोर चलेन । बिहानसम्म बुबाले सास फेर्न निकै संघर्ष गर्नुपर्‍यो । आजै बिहान प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याएको हुँ’, अर्जुनले शिलापत्रसँग भने ।
बेड नपाएपछि रोमकान्त भुइँमै बसेर उपचार लिन बाध्य छन् । ‘अक्सिजन लेभल ६५ भन्दा मुनि छ । बुवाको अवस्था झन्‌झन् बिग्रँदो छ’, अर्जुन आत्तिएका छन्, ‘यस्तो बेला उहाँका लागि एउटा बेड मिलेको भए राहत हुन्थ्यो ।’
अर्जुनले बुबालाई बिजोगसँग यसरी अस्पतालमा राख्नुभन्दा अक्सिजन किनेर घरैमा लगेर रेखदेख गर्ने पनि नसोचेका होइनन् । तर, उनले अक्सिजन किन्न पाएनन् ।
इमर्जेन्सी कक्षकै दायाँतिर भुइँमै बसेर अक्सिजन लिइरहेकी छन्, मणिग्रामकी ३५ वर्षीया सीता कुँवर । पाँच दिनअघि कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि उनी घरमै आराम गरेर बसेकी थिइन् । तर, सास फर्न मुस्किल हुन थालेपछि उनको परिवारले अस्पतालमा खाली बेडको तलास सुरु गर्‍यो । तर पाइएन । ‘अनि जे होला होला भनेर यहाँ आएँ । यहाँ पनि बेड खाली रहेनछन् । अहिले अक्सिजन लेभल ७० छ । भुइँमा बस्न अप्ठेरो परे पनि सास फेर्न केही सहज भएको छ’, मुखबाट अक्सिजन पाइपलाई थोरै माथि पन्छाएर उनले भनिन् ।
यस्तो बिजोगसँग उपचार लिइरहेका रोमकान्त र सीता त्यही प्रदेशका मतदाता हुन्, जहाँ हिजो केही घण्टाभित्र सरकार ढलेर नयाँ बनिसकेको छ । 'मुख्यमन्त्रीले जस्केलोबाट कुर्सी जोगाउनुभयो, उहाँको पार्टीलाई भोट दिएका मेरा बाले पैसा तिरेर अस्पतालमा एउटा बेड पनि जोगाउन सक्नुभएन', अर्जुनले भने ।
यी दुई बिरामीले त कम्तीमा भुइँमा बसेर भए पनि अक्सिजन लिन पाएका छन् । तर, भुइँमा समेत ठाउँ नपाएर अक्सिजन अभावमा तड्पिरहेका बिरामी यहाँ थुप्रै छन् । कतिपयले समयमै उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाउनुपरेको छ । कोरोना सुरु भएयता प्रदेशमा ५ सय ९७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार दोस्रो लहर सुरु भएपछि मृत्यु दर बढेको छ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षबाहिर दाहिनेतिर सूचनापाटीमा लेखिएको छ, ‘अहिले यहाँ खाली छैन । सोर्सफोर्स लगाएर बेडका लागि अनावश्यक दुःख नदिन आग्रह गर्दछौँ ।’ यही अस्पतालबाहिर कोरोना परीक्षण गर्नेहरूको घुइँचो छ । अनि इमर्जेन्सीमा कोरोनो संक्रमितहरूको भीड । प्रदेशका अन्य अस्पतालहरूको हालत करिब यही हो ।
लुम्बिनीमा कोरोना संक्रमितकै लागि भनेर चारवटा विशेष अस्पताल छन् । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको बुटवल धागो कारखानामा, भीम अस्पताल भैरहवा, भेरी अस्पताल बाँके र बेलझण्डी अस्पताल संक्रमितहरूको आशाका केन्द्र हुन् ।
स्वास्थ्य निर्देशनालयका सूचना अधिकारी रोशलाल चौधरीका अनुसार हिजोसम्म प्रदेशका चारवटा कोभिड अस्पतालको जनरल बेडमा १ सय ९८ जना, अक्सिजन बेड अर्थात हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयू) र सघन उपचार कक्ष आईसीयूमा २ सय २२ जना अनि भेन्टिलेटरमा १२ जनाको उपचार भइरहेको छ ।
राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा २२ जना जनरल वार्डमा उपचारत छन् । कपिलवस्तु जिल्ला अस्पतालको जनरल वार्डमा सात जना र एक जना आईसीयूमा छन् । पृथ्वीचन्द्र अस्पताल परासीमा जनरलमा एक जना, रोल्पामा १ जना र पूर्वरुकुम अस्पतालमा दुई जना संक्रमितको उपचार भइरहेको उनले बताए ।
प्रदेशका विभिन्न छवटा निजी अस्पतालमा २ सय १७ जना संक्रमितको जनरल वार्डमा उपचार भइरहेको छ । एचडीयू र आईसीयूमा ५४ र भेन्टिलेटरमा छ जनाको उपचार भइरहेको चौधरीले बताए । नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा १ सय तीन जना लक्षणसहितका संक्रमित छन् । यीबाहेक ४० जना एचडीयूमा उपचाररत छन् । युनिर्भसल कलेज अफ मेडिकल कलेजमा ५५ वटा जनरल बेड, ९ आईसीयू र ६ भेन्टिलेटर भरिभराउ छन् ।
यसैगरी देवदह मेडिकल कलेजमा पाँच जना, क्रिमसन अस्पतालको जनरल बेडमा १०, आईसीयूमा ५, युनाइटेड मिसन पाल्पाको जनरल बेडमा २६ जना र लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पामा १८ जना जनरल वार्डमा संक्रमितको उपचार भइरहेको चौधरीले बताए ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडल सुपरिटेन्डेन्ट डा. राजेन्द्र खनालले कोभिड अस्पतालमा कुनै पनि बेड खाली नभएको बताए । ‘दैनिक ८/१० कल बेडका लागि आउँछन् । तर, एउटा पनि बेड खाली छैन’, उनले शिलापत्रसँग भने, ‘यस्तो स्थिति आउन सक्छ भनेर बेलैमा ध्यान दिन सकिएन । अहिले करिब निरीह बन्नुपरेको छ ।’
फोकल पर्सन डा. नन्दु पाठकका अनुसार कोरोना अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा अक्सिजनसहित संक्रमितको उपचार थालिएको छ । ‘आईसीयूमा राख्नुपर्ने बिरामी भए पनि बेड नभएकाले आइसोलेसन कक्षमा अक्सिजनको सहायताले उपचार भइरहेको छ । जनशक्ति कम हुँदा अहिले अप्ठेराे छ’, उनले भने, ‘अर्कातिर स्वास्थ्यकर्मी नै धमाधम संक्रमित हुन थालेपछि समस्या चुलिएको छ ।’ लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री लीला गिरीले प्रदेशका अस्पतालहरूमा बेडको अभाव हुनु अत्यासलाग्दो पक्ष भएको बताए ।
आश्चर्यमा छन् बिरामीका आफन्त
शंकरनगरका रोमकान्त अस्पतालमा बेड नपाएर घरमा तड्पिरहेका बेला मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले हिजै राजीनामा दिएर साँझ नै नयाँ मुख्यमन्त्रीको शपथ लिँदै थिए । त्यसअघि पोखरेलकै गृहजिल्लामा कोरोनाका पाँच संक्रमितले अन्तिम सास लिएको सूचना स्वास्थ्य निर्देशनालयले निकालेको थियो ।
नयाँ संक्रमितको सूचीमा परेका ८६ मध्ये धेरै दंगाली अस्पतालमा सजिलै उपचार सेवा नपाइने हो कि भन्नेमा चिन्तित थिए । ‘सत्ता सुरक्षाका लागि बिहानदेखि बेलुकासम्म जसरी एकपछि अर्को बैठक, निर्णयहरू गरिए, तिनै निर्णयहरू जनताको सुरक्षाका लागि भइदिएको भए अहिले हामीले अस्पतालमा यसरी भौँतारिनुपर्दैन थियो होला’, शंकरनगरका अर्जुनले अफसाेच जनाए ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामी आफन्त कुर्न आएकी दाङकी पुनम डाँगी मुख्यमन्त्री मात्रै नभएर अधिकांश नेताका लागि जनताभन्दा कुर्सी प्यारो देखिएको बताउँछिन् । ‘महामारीका बेला जनतालाई सहयोग गर्न छोडेर सरकार ढाल्न तल्लीनहरू र सरकार जोगाउन सबथोक बिर्सिनेहरू दुवै उस्तै लाग्छन् मलाई’, उनले भनिन्, ‘एक दिनमा सरकार ढालेर बनाउन सक्ने मुख्यमन्त्रीले महिनौँसम्म अस्पतालमा बेडहरू बनाउन ध्यान नदिनुजस्तो गैरजिम्मेवारी कुरा अरु के हुन सक्छ ?’
बरु कोरोना फैलाए
चैत लागेदेखि नै छिमेकी भारतमा कोरोना डरलाग्दो गरी फैलिन थाल्यो । चैतको अन्तिम सातातिर नेपालमा पनि नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोनाको प्रसार तीव्र बन्यो ।
तर, सीमा जोडिएको प्रदेश भए पनि लुम्बिनी सरकारले भारतबाट भित्रिनेहरूको सन्दर्भमा निर्णय गर्न ढिलाइ गर्‍यो । केही दिनअघिसम्म भारतबाट नाका हुँदै हुल बाँधेर मानिसहरू लुम्बिनी छिरिरहेका थिए । बेलहियाबाट दैनिक ५ सय जना आएका थिए । यसैगरी नेपालगञ्ज, कृष्णनगरलगायत नाकाबाट पनि दैनिक ४ सयको हाराहारीमा बिनापरीक्षण मानिसहरू नेपाल प्रवेश गरेका थिए । सीमानाकामा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण पनि नगरी गाउँ पसेका तीमध्ये कतिपय मानिसबाटै संक्रमण फैलिएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको अनुमान छ ।
भारतमा कोरोना फैलिन थालेपछि पनि आवश्यक तयारीका लागि लुम्बिनी सरकारसँग पर्याप्त समय थियो । तर, प्रदेश राजनीति जनताको सुरक्षातिर नभई कुर्सीतिर बढी केन्द्रित देखियो । सत्ताधारी र विपक्षीहरू हुल बाँधेर बैठकहरू गरिरहेका थिए ।
१५ वैशाखसम्म सरकारले नै भीडभाड गरिरहेको थियो । बाँकेमा कोरोनाले ‘सुनामी’को रूप लिइसक्दासम्म रुपन्देहीमा भेला र गोष्ठी भइरहेका थिए । धेरै भिडभाड हुने यातायात, मालपोत, नापी, प्रशासन कार्यालय खुलै थिए । १५ वैशाखमा प्रशासनकै अनुमतिले सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो, त्यो पनि स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डबेगर ।
यही १५ वैशाखमा बुटवलको देवीनगरस्थित ट्रायल सेन्टरमा प्रयोगात्मक परीक्षा दिनेको भीड ।
‘१९ वैशाखमा दिनभर मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकार टिकाउन जुनखाले सक्रियता देखाए, समय पाएका बेला उसैगरी कोरोनो रोकथाम र स्वास्थ्य पूर्वाधारको बन्दोबस्तीमा तदारुकता देखाएको भए जनता अहिले अक्सिजनको अभावमा, बेड नपाएर भुइँमा तड्पिनु पर्दैन थियो’, मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द खनाल भन्छन् । पद जोगाउन संविधान र लोकतन्त्रको घाँटी नमोठ्न पछि नपरेका मुख्यमन्त्रीले जनताको जिउ जोगाउन के गरे ?,’ खनाल प्रश्न गर्छन् ।
मुख्यमन्त्रीको गतिविधि बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीलाई हतोत्साही पार्ने खालको भएको खनालको टिप्पणी छ । भन्छन्, ‘यो बेला मुख्यमन्त्रीले सत्ताको जोडघटाउमा नलागेर भारतसँग सीमा जोडिएका नाकामा ध्यान दिनुपर्थ्याे । बाँकेपछि रुपन्देहीलाई हट स्पट हुनबाट जोगाउनतिर लाग्नुपर्थ्याे । प्रयोगमा नआएका, निर्माणाधीन तर तत्काल प्रयोग गर्न सकिने संरचनाहरूलाई स्वास्थ्य पूर्वाधारका रूपमा उपयोग गर्नतिर लाग्नुपर्थ्याे । स्वास्थ्यकर्मीलाई उत्साहित गर्नुपर्थ्याे ।’
लेखक युवराज कँडेल पनि सरकारको कमजोरीको मूल्य अहिले नागरिकले चुकाउनुपरेको बताउँछन् । भारतमा संक्रमण फैलिरहँदा नेपालमा त्यसको अनुमान गरी प्रशस्त तयारी गर्न सकिने समय थियो । तर, अहिले प्रदेशमा उपचार अभावले मान्छे मर्नु बिडम्बना भएको उनको भनाइ छ । ‘समस्या बिकराल बनेपछि प्रदेशले संक्रमितको उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको छ । समय हुँदा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएको भए आज यो स्थिति नै पो आउँदैन थियो कि !,’ उनले भने ।
कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु हुनै लाग्दा करिब मौन रहेको सरकारले हालै मात्र कोभिड कोषमा १० करोड रुपैयाँ राख्ने निर्णय गरेको छ भने प्रदेशका चारवटै कोभिड अस्पतालमा ५ सय ८६ जनाको अस्थायी चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थप गरेको छ । यो निर्णय सरकारले हिजो मात्र गरेको हो ।
भारतमा दोस्रो लहर सुरु हुनासाथ सीमानाकामा परीक्षणको व्यवस्था नगर्नु सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भएको कँडेल बताउँछन् । ‘भारतबाट मानिसहरू भित्रिँदै गर्दा होल्डिङ सेन्टर बनाई परीक्षण गरेर मात्र गाउँतिर जान दिएको भए कोरोना समुदायस्तरमा फैलिन पाउँदैन थियो’, उनले भने ।
सरकारले सिर्फ योजना बनायो
आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री वैजनाथ चौधरी जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति सरकार प्रतिवद्ध रहेको दाबी गर्छन् । तर, कोभिड संक्रमण मत्थर भएका बेला स्वास्थ्य प्रणालीमा के सुधार गर्नुभयो, अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ उनीसँग छैन । भन्छन्, ‘हामीले योजना बनाएका छौँ ।’
एक दिनमा सत्ता ढालेर बनाउन सक्ने तपाईंहरूले महिनौसम्म योजना मात्र बनाउनुभयो त ? मन्त्री चौधरीको जवाफ छ, ‘हिजो मात्र हामीले कोभिड कोषमा १० करोड राख्ने निर्णय गरेका छौँ । ५ सय ८३ जना अस्थायी चिकित्सक दरबन्दी थप गरेका छौँ ।’
जनताको जिउभन्दा ठूलो सत्ता नभएको उनको जिकिर छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दीन खान मन्त्री चौधरीको दाबीलाई फोगत र हास्यास्पद भन्छन् । उहाँहरूलाई कुर्सीभन्दा महत्त्वपूर्ण जनता लाग्थ्यो भने अहिले प्रदेशमा बिरामीले उपचार अभावमा किन मर्नुपर्थ्याे ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
सरकारमाथि आक्षेप लगाउँदै गर्दा तपाईंहरू पनि यो बेथितिप्रति जिम्मेवार हाेइन र ? नेता खान विपक्षीको काम सरकारलाई सचेत गराउने भएको र यसका लागि मुख्यमन्त्रीले संसद् नै चल्न नदिएको बताउँछन् । ‘प्रदेशका जनताको समस्याबारे हामीलाई थाहा छ तर सरकारलाई यसबारे ध्यानाकर्षण गराउने थलो संसद् नै कहाँ चल्न दियो सरकारले ?’, उनले भने । यद्यपि, आफ्नो पार्टीले १४ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर नागरिकको स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार हुन आग्रह गरेको खानले बताए ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले जे दाबी गरे पनि लुम्बिनीका जनता कोरोनाले लखतरान छन् । प्रदेशमा कुल संक्रमित संख्या ४१ हजार ५ सय ३५ छ । यीमध्ये २९ हजार ३ सय ७२ जना निको भएका छन् । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार अहिले सबैभन्दा रुपन्देहीमा १३ हजार ३ सय ९० संक्रमित छन् । त्यस्तै बाँकेमा १० हजार २ सय २१, दाङमा ५ हजार ४ सय १५, पाल्पामा २ हजार ४ सय ७१, गुल्मीमा १ हजार ८६, अर्घाखाँचीमा १ हजार २७, प्युठानमा ९ सय ६४, बर्दियामा २ हजार १ सय १६, नवलपरासीमा १ हजार ७ सय ४५, रोल्पामा ३ सय २६ र रुकुमपूर्वमा ९८ जना संक्रमित छन् ।
मृत्यु हुनेमा पनि रुपन्देही अगाडि छ । यहाँ २ सय चार जनाले कोभिडका कारण ज्यान गुमाएका छन् । यसैगरी, बाँकेमा ९९, कपिलवस्तुमा ४८, दाङमा ८१, पाल्पामा ४०, गुल्मीमा २०, अर्घाखाँचीमा १७, प्युठानमा १२, बर्दियामा २९, नवलपरासीमा ३९, रोल्पामा पाँच जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका डा. रुद्र भण्डारी सरकारबाट जुनखाले तदारुकता देखाइनुपर्थ्याे, त्यो नभएकोप्रति दु:खी छन् । अहिले सरकारबाट भन्दा पनि अस्पताल व्यवस्थापन, मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको हौसलाअनुसार काम गरिरहेको उनले बताए । ‘भएका चिकित्सकमध्ये कतिपय आफैँ संक्रमित हुनुभएको छ । अहिले स्वास्थ्यकर्मीकै अभाव खेप्नुपरेको छ । अस्पताललाई आवश्यक जनशक्ति अझै दिइएको छैन’, उनले भने ।
कोरोना विशेष अस्पतालका फोकल पर्सन डा. नन्दु पाठक संक्रमण न्यून हुँदा जेजति बेड र अन्य सुविधा थिए, अहिले संक्रमण उच्च हुँदा पनि त्यसैले काम चलाउनुपरेको बताउँछन् । ‘कोभिडका बिरामीको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकहरूलाई खाजा खुवाउने रकम जुटाउन सहयोगी संस्थाहरूलाई फोन गरिरहेको छु । सेवा सुविधाको त के कुरा गर्नु र ?,’ उनले भने ।
तस्वीरहरू ः विकास पराजुली/बुटवल ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २०, २०७८, २०:१४:००
विकाश पराजुली/नवराज कुँवर